Zoomgu inoita kuyedza kwakabatana kurwisa "denda" !!! - Kambani Nhau-Hunan Zhonggu Science uye Technology Co, Ltd.
Zoomgu inoita nhamburiko yakabatana kurwisa "denda" !!!
Views:24 Author: Shambadzira Nguva: 24 Origin:
Edza nepatinogona napo kubata nemamiriro ezvinhu akaipisisa, Rwisa "denda"
Kubva kushanda kwaZhonggu, tashanda nesimba kuti tishande zvakajairika uye takabatana pamwe nehurumende dzemunharaunda nenharaunda kumatunhu ese kudzora denda iri.
Musi waFebruary 12, vashandi vese veZhonggu vakaita nucleic acid kuongorora uye vakaedza nepese pavanogona kubvisa njodzi dzinogona kuitika.
Iyo kambani yakagadzira zviyero zvevimbiso zvekudzivirira uye kudzora korona nyowani yechirwere chebhizinesi, yakaendesa matanho akasiyana ekurwisa denda pakutanga, uye nekushingairira kuve nechokwadi kwekuvandudzwa uye kugadzikana kwekuvandudzwa kwemabasa ese.
Tine hunhu hwekutarisira kusosaiti uye vashandi veZhonggu, isu tinonyatso kunyoresa vashandi kuti vapinde uye vasiye chirimwa, uye tisati tapinda mumuti, tinofanirwa kutarisa tembiricha, disinfect uye rimwe basa; isu tinoramba zvese zvikamu zvekunze nevashandi kuti vapinde muchirimwa, uye panguva imwecheteyo, vatinoshanda navo munzvimbo yedenda vanonoka kushanda, vasingasiye mukana wehutachiona!
Mazuva ese, tinoomerera pakumwaya mvura inouraya utachiona muzvivakwa zvehofisi, mashopu uye dzimba dzekudyira kuti utapukire hutachiona zvachose pasina makona akafa. Isu tinokwesha uye kuisa mishonga inouraya nzvimbo dzeveruzhinji dzakadai semahofisi nedzimba dzemusangano kwenguva dzinopfuura mbiri. Panguva imwecheteyo, isu tinosimbisa kuchenesa uye kuongorora disinfection yemakona akafa munzvimbo yemuti
Imwe maski pamunhu pazuva
Wese munhu ari mufekitori anofanira kupfeka masiki chero nguva!
Ramba uchitora tembiricha yevashandi kanopfuura kaviri pazuva
Chimbuzi uye kamuri yemusangano zvakagadzirirwa mishonga inouraya utachiona uye sanitizer nemaoko
Mushure mekudzokera kubasa, iyo sisitimu yekuendesa kwakasarudzika uye chikafu chakaparadzaniswa chinofanirwa kuitwa kudzivirira kuungana kwevanhu
Bazi rega rega rakapihwa munhu ane basa rekutarisira denda rekudzivirira uye kutonga kweDhipatimendi
Zvinoda mushandi wese kuti aite basa rakanaka rekuzvidzivirira,
Geza maoko nguva zhinji uye chengeta masiki anoshandiswa kure nemarara.
Panguva imwecheteyo, ita basa rakanaka mukumisikidza marara uye kumisa kusvibiswa kwechipiri!
Hondo yekurwisa denda ndeye kurwira kwenguva refu.
Tinofanira kuchengeta mwero wepamusoro wekusvinura uye tisamborega kusvika miniti yekupedzisira.
Ndiri kungovimba kuti denda richapera nekukurumidza.
Kana tsime rasvika, isu tese tinogona kufamba mumigwagwa tisina masiki
Ndinovimba nyika ine runyararo uye vanhu vakachengeteka uye vanobudirira!
Zvadaro: How kusarudza Vending michina?